Maitiro ekuisa ekuwedzeredza Chrome mune nyowani Firefox | Linux Vakapindwa muropa
Shanduro nyowani dzeMozilla Firefox dzinouya nezvishamiso zvishoma, kushamisika uko kusingogumiri pazvinhu zvitsva kana kumhanya kunoshamisa, asi mukuenderana uko vashoma vedu vaitarisira.
Shanduro nyowani dzeMozilla Firefox dzinoenderana neiyo Chrome yekuwedzera, izvo zvinoita kuti tikwanise kuve nemabasa akafanana neGoogle Chrome asi pasina kushandisa iyi inozivikanwa uye inorema webhu bhurawuza. Kune izvi isu tinongoda chete account yeFirefox account uye yakareruka yekuwedzera inonzi Chrome Chitoro Foxified.
Sezvatakataura, isu tinofanira kutanga tave nazvo account yekuvandudza yeFirefox kubvira mukwanisi Chrome Chitoro Foxified ichada siginecha painoshandura iyo yekuwedzera Chrome. Iyo Chrome Chitoro Foxified mashandiro ari nyore kwazvo nekuti ine yekushandura iyo yekuwedzera Chrome kuva Firefox yekuwedzera. Kana tangova neakaundi account, tinoenda kuFirefox add-ons chitoro uye nekuisa iyo Chitoro cheChrome Foxified. Mukana wekusaiwana, inogona kuwanikwa kuburikidza neizvi link.
Zvino, isu tinongofanirwa kuenda kuchitoro cheChrome, kubva kuMozilla Firefox uye pachinzvimbo che "gadza" bhatani, "Wedzera kuFirefox" ichaonekwa (sekune Mozilla Firefox yekuwedzera-ons). Tinodzvanya bhatani uye kuwedzera kweChannel kuchawedzerwa kuMozilla Firefox yedu. Bhurawuza redu rinotibvunza mvumo yekushandisa iyi nyowani yekuwedzera uye mushure mekubvuma, tichazokwanisa kushandisa iyo nyowani yekuwedzera.
Iyo inomiririra Chrome Chitoro Foxified haienderane nezvose zvinowedzera zveChrome sezvo vamwe vachivimba nemaraibhurari eChannel kana eGoogle ayo asina Firefox, asi kazhinji mazhinji acho anoenderana neshanduro nyowani dzeMozilla Firefox. Kana tikasawana iyo nyowani yekuwedzera, tinogona kutarisa Chrome Store Foxified marongero uye tione izvo zviwedzero zvakaiswa zvinobudirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekuisa ekuwedzeredza Chrome pane iyo nyowani Firefox